Fanampian’Andriamanitra eo amin’ny asan’ny Samaritana tsara fanahy
"Fa nisy kosa Samaritan anankiray nandeha tamin'ny nalehany ka tonga teo aminy, ary nony nahita azy, dia onena. Dia nanatona izy, ka nofeheziny ny feriny, sady nasiany diloilo sy divay; dia nampitaingeniny tamin'ny bibiny iry, ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny, dia notsaboiny" — Lio. 10:33,34.
Naseho ahy fa hahita olona ao anatin'ny lavaka lalin'ny fahasimbana, izay nanana saina salama sy fahaiza-manao mamiratra indrindra teo aloha, ny asa misionera medikaly, ka ho avotra avy amin'ny toerana lavo izy ireo, amin'ny alalan'ny asa mendrika atao. Izany no fahamarinana tao amin'i Jesosy tokony entina eo anatrehan'ny sain'ny olona rehefa avy nokarakaraina amim-pitiavana izy ireo ary voavaha ny zavatra ilainy ara-batana. Hiasa sy hiara-hiasa amin'ny olona izay mamonjy fanahy toy izany ny Fanahy Masina, ary misy sasany hankasitraka ny fanorenana eo ambony Vatolampy ny finoany.
Tsy tokony hisy hafatra tsy mahazatra avy amin'ny fampianarana hafahafa atao amin'ireo izay tian'Andriamanitra sy iantrany; fa rehefa hampiana ara-batana izy ireo amin'ny alalan'ny mpiasan'ny fahasalamana dia hiara-hiasa amin'ny olona ny Fanahy Masina hanaitra ny hery ara-panahiny. Hifoha hanao hetsika ny herin-tsaina, ka ireo fanahy mahonena ireo, ny ankabeazany, dia voavonjy ho ao arnin'ny fanjakan'Andriamanitr
Tsy misy na inona na inona afaka ny haneho ny toetoetry ny asa amin'ny fanehoana ny fahamarinana hanampy ny olona amin'ny toerana misy azy ireo afa-tsy ny asan'ilay Samaritana ihany. Ny asa atao amim-pahamendrehana harnonjy ny mpanota mahantra notsinontsinoavin'ny fiangonana dia hanokatra varavarana hidiran'ny fahamarinana. Haim hajoro ny lamina sy ny laharam-pahamehana samihafa amin'ny zavatra rehetra eo amintsika, amin'ny maha-vahoakan'Andriamanitra antsika, ary rehefa tanterahina izany karazan'asa izany, dia hisy tontolo hafa vaovao mihitsy hanodidina ny fanahin'ireo mpanompon'Andriamanitra; hifandray amin'ireo manao ny asan'Andriamanitra ny Fanahy Masina. Ary ireo izay hiasan'ny Fanahy Masina dia ho hery eo an-tanan'Andriamanitra hampitsangana, hampahery ary hamonjy ireo fanahy izay ho very. - WM, 131,132.